စင်မြင့်ထက်မှာဖျော်ဖြေရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်စားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချီးမွမ်းမှုတွေရရှိနေတဲ့ IVE အဖွဲ့ဝင် Wonyoung - Cele Gabar
စင်မြင့်ထက်မှာဖျော်ဖြေရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်စားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချီးမွမ်းမှုတွေရရှိနေတဲ့ IVE အဖွဲ့ဝင် Wonyoung
ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးကေပေါပ့်အိုင်ဒေါအဖွဲ့ကတော့ IVE ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် (၆) ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ လှပပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ အိုင်ဒေါတွေအဖြစ်ပရိသတ်က အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလ(၇)ရက်နေ့က Mnet ရဲ့ M! Countdown အစီအစဉ်မှာ IVE အဖွဲ့ကတော့ Love Dive နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေမှုကိုလွှင့်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ပရိသတ်တွေနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ IVE အဖွဲ့ရဲ့ center ဖြစ်တဲ့ Wonyoung ကို ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတော့ စတိုင်ကျလှပနေခဲ့ကြပေမယ့် Wonyoung ရဲ့တောက်ပလှပနေမှုက ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာပါ။
Wonyoung ကတော့သွယ်လျပြီးလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးတွေကြောင့် မီဒီယာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိထားတာပါ။ အခုလည်း ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာတောက်ပနေခဲ့တာကြောင့် ချီးမွမ်းမှုတွေရရှိနေတာကတော့ မထူးဆန်းလှပါဘူးနော်။
စင္ျမင့္ထက္မွာေဖ်ာ္ေျဖရင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕အာ႐ုံကိုဖမ္စားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းမႈေတြရရွိေနတဲ့ IVE အဖြဲ႕ဝင္ Wonyoung
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုရရွိလာတဲ့အမ်ိဳးသမီးေကေပါပ့္အိုင္ေဒါအဖြဲ႕ကေတာ့ IVE ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ (၆) ဦးနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေတာ့ လွပၿပီးငယ္႐ြယ္တဲ့ အိုင္ေဒါေတြအျဖစ္ပရိသတ္က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔က Mnet ရဲ႕ M! Countdown အစီအစဥ္မွာ IVE အဖြဲ႕ကေတာ့ Love Dive နဲ႔အတူ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကိုလႊင့္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ ပရိသတ္ေတြနဲ႔အင္တာနက္အသုံးျပဳသူေတြၾကားမွာ IVE အဖြဲ႕ရဲ႕ center ျဖစ္တဲ့ Wonyoung ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအားလုံးကေတာ့ စတိုင္က်လွပေနခဲ့ၾကေပမယ့္ Wonyoung ရဲ႕ေတာက္ပလွပေနမႈက ပရိသတ္ေတြရဲ႕အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့တာပါ။
Wonyoung ကေတာ့သြယ္လ်ၿပီးလွပတဲ့ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မ်က္ႏွာေလးေတြေၾကာင့္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အာ႐ုံစိုက္မႈကိုရရွိထားတာပါ။ အခုလည္း ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိစြာေတာက္ပေနခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းမႈေတြရရွိေနတာကေတာ့ မထူးဆန္းလွပါဘူးေနာ္။
Posted in International CeleTagged International Cele, Kpop Idol, Wonyoung
Previous post အိမ်ထောင်ပြုဖို့စဉ်းစားထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာတဲ့ (၃၇)နှစ်အရွယ်မင်းသမီးချော Park Min Young
Next post ကိုယ်ဝန်ဆောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သင်္ကြန်မှာ ဖျော်​ဖြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်မဏ္ဍပ်မှာမှ သီချင်းမဆိုဖြစ်ကြောင်း ​အသိပေးလာတဲ့အိမ့်ချစ်”